La hadal dhakhtar adoo jooga guriga oo isticmaalaya adeegyada caafimaadka ee fogaan-aragga ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Korona Fayraska (COVID-19)
La hadal dhakhtar adoo jooga guriga oo isticmaalaya adeegyada caafimaadka ee fogaan-aragga ah
La hadal dhakhtarka adiga oo jooga guriga oo isticmaalaya booqashooyin fogaan-arag ah
Telehealth, oo sidoo kale loo yaqaano daryeelka fogaan-aragga ah, wuxuu kuu sahlaa inaad ka hesho bixiyayaasha daryeelka caafimaadka meel ka baxsan xafiiska bixiyaha, sida guriga ama shaqada. Bixiyeyaal badan ayaa laga yaabaa in laga helo booqashooyinka caafimaadka ee fogaan-aragga ah iyadoo loo marayo telefoonkaaga ama kumbuyuutarkaaga si loo daboolo baahiyaha daryeel ee kala duwan, oo ay ku jiraan booqashooyinka daryeelka caadiga ah ama degdegga ah. UnitedHealthcare waxay hayaan ikhtiyaaro aad booqashada caafimaadka ee fogaan-aragga ah uga helayso bixiyayaasha deegaankaaga ama danwadaagta caafimaadka ee la doorbido ee UnitedHealthcare.
Ogow wax badan oo ku saabsan booqashooyinka fogaan-aragga ah oo daawo muuqaal muujinaya sida booqashada caadiga ah ee caafimaadka ee fogaan-arraga ah u shaqayn karto.
Booqashooyinka fogaan-aragga ah ee laga helo bixiyayaasha deegaankaaga
UnitedHealthcare waxaa ka go'an inay kaa caawiyaan inaad uga hesho daryeelka aad u baahan tahay meel ka baxsan xafiiska dhakhtarka booqashooyin fogaan-aragga ah.
Qorshayaasha UnitedHealthcare Medicare Advantage:
Kharash qeybsiga loogu talagalay booqashooyinka fogaan-aragga ah ee la xiriira baaritaanka COVID-19:Wixii booqashooyinka caafimaadka ee la xiriira COVID-19, waxaad heli doontaa $0 kharash qaybsiga ah ee loogu talagalay booqashooyinka bixiyayaasha ku jira iyo ka baxsan shabakadda iyadoo loo marayo muddada xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee qaranka, ee hadda la qorsheeyay inay dhammaato Abriil 15, 2022.
Kharash qeybsiga loogu talagalay daaweynta COVID-19 iyadoo loo marayo booqashooyinka fogaan-aragga ah:Waxaad mas'uul ka noqon doontaa kharashka qeybsiga (lacagaha go'an, kugu soo aado ama la jari karo) ee loogu talagalay daaweynta COVID-19 iyadoo loo marayo booqashooyinka fogaan-aragga ah. Inta badan qorshayaasha UnitedHealthcare Medicare Advantage waxay leeyihiin $0 oo lacagta go'an ah ee loogu talagalay adeegyada fogaan-aragga ah ee la caymiyo. Ka hubi dhigaalada qorshahaaga wixii tafaasiisha kharash qeybsiga ah.
Baahinta helitaanka booqashooyinka caafimaadka ee fogaan-aragga ah ee aan la xiriirin COVID-19:Wixii bixiyeyaasha ku jira iyo ka baxsan shabakadda, waxaad heli doontaa booqashooyinka fogaan-aragga ah iyadoo loo marayo muddada xaaladda degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee qaranka, oo hadda la qorsheeyay inay dhammaato Abriil 15, 2022.
Kharash qeybsiga booqashooyinka fogaan-aragga ah ee aan la xiriirin baaritaanka COVID-19 waxaa go'aamin doona qorshaha macaashkaaga. Inta badan qorshayaasha UnitedHealthcare Medicare Advantage waxay leeyihiin $0 oo lacagta go'an ah ee loogu talagalay adeegyada fogaan-aragga ah ee la caymiyo. Ka hubi dhigaalada qorshahaaga wixii tafaasiisha kharash qeybsiga ah.
Qorshayaasha caafimaadka ee Medicaid: Wixii shakhsiyaad ah oo ka diiwaangashan Qorshayaasha Bulshada ee UnitedHealthcare, kala duwanaanshaha gobolka iyo qawaaniinta ayaa laga yaabaa in la dabaqo inta lagu gudajiro waqtigan. Fadlan dib uga eeg mareegta UnitedHealthcare Community Planiyo degelka gobolkaaga macluumaadka ugu dambeeyay ee la dabaqi karo. Haddii aysan jirin ka-dhaafitaano gobol gaar u ah oo la dabqi karo, tilmaamaha caadiga ah ee qorshaha UnitedHealthcare ayaa la dabaqi doonaa.
Wixii macluumadka macaashyada caymiska ah, fadlangal koontadaada qorshaha caafimaadkaama dib-u-eeg ikhtiyaarada caymiska COVID-19 ee dheeraadka ah ee laga yaabo in la heli karo.
Booqashooyinka fogaan-aragga ah ee loogu talagalay 24/7 daryeelka degdega ah
Gal koontadaada qorshaha caafimaadka si aad wax badan uga ogaato macaashkaaga Booqashada Fogaan-aragga ah.
Ka warqab caafimaadkaaga shucuureed
Waqtiga walaaca jiro, way adkaan kartaa in la adkeysto. La hadalka qof ayaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo inaad wax fiican dareento. Waa kuwaan waxoogaa qaababka aad ula xiriiri karto dadka aadna isku daryeeli karto.
Khadka Nolosha ee Kahortagga Is-dilka ee Qaranka ayaa bixiya 24/7 taageero iyadoo loo marayo wadasheekaysiga khadka tooska ah ee loo yaqaano Lifeline Chat. Waxaad sidoo kale wici kartaa 1-800-273-8255 ama 1-800-799-4889 (TTY) si aad u hesho taageero.
Khadka Farriinta Dhibaatada waa dhigaal lacag la'aan ah oo aad heli karto 24/7 si uu kaaga caawiyo inuu kugu xiro talo-bixiyaha xasaradaha U dir farriinta “Home” lambarka 741741
Hel caawimaad si aad u fahamto macaashkaaga
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan macaashyadaada, gal koontadaada qorshaha caafimaadka ama wac lambarka ku qoran Kaarka Aqoonsiga Xubinta. Waxaan kaa caawin karnaa inaad fahamto caymiskaaga, aad hesho bixiyaha daryeelka caafimaadka ama waxaan kugu xiri karnaa kalkaaliye.
Gal koontadaada qorshaha caafimaadka (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Tusmada la xiriirta
Isticmaal Qaabkeena Raadiyaha Goobta Baaritaanka
Raadraac Context link
Kaarka caymiska ayaa kaa caawin kara inaad fahamto inaad ku jirto qorshaha caafimaadka ee loo-shaqeeyuhu daboolo. Haddii ay ku qoran tahay, “Administered by United HealthCare Services, Inc.” qaybta hore, dhinaca midig ee hoose, waad ku jirtaa qorshaha caymiska ee loo-shaqeeyaha daboolo. Dhigaalada ugu fiican ee macluumaadka macaashka caafimaadka ee faahfaahsan ayaad ka heli doontaa maamulaha macaashyada ee waaxda shaqaalaynta.
Boggani wuxuu sharraxayaa manfacyada aannu siino dhammaan xubnaha gobollada oo dhan. Waxay sidoo kale ku jiraan shuruudaha federaalka. Macaashyo badan ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorshayaasha qaarkood. Context link Waxaan samaynay sharciyo iyo dhaqamo lagu dabaqi karo qaar ka mid ah alaabadayada waqtigan. Context link Macluumaadkan waa mid kooban waana la beddeli karaa. Context link Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir wakiilka koontadaadaa ama wac lambarka ku qoran kaarkaaga aqoonsiga (ID) xubinta. Summadaha ganacsi waa hantida mulkiilayaasha kala duwan.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 05.04.2022 waqtiga 10:21 SUBAXNIMO CDT